Maxay ka wada hadleen RW Rooble iyo Safiirka dalka Turkiga? | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xaafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha wadanka Turkiga, Mahmet Yilmez, waxayna ka wada hadleen xaaladaha siyaasadeed ee dalka.
Kunakaan gaarka ah, waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga & xiriirka labada dal iyo Arrimaha Doorashooyinka dalka, kuwaas oo hadda lagu wareejiyay Xukuumadda Xil-gaarsiinta.
Safiirka dalka Turkiga, Mahmet Yilmez, oo ka jawaabayay codsigii RW Rooble, ee ahaa in Soomaalida iyo Beesha Caalam-kuba garab ku siiyaan hirgalinta doorasho la isla ogol-yahay, ayaa sheegay Dowladdiisu garab taagan tahay Xukuumadda.
Dowaladda Turkiga oo ka mid ah Saddex Waddan oo hore uga aamusay baaqyadii ka soo baxayay Beesha Caalamka ee cadaadiska lagu saarayay Maamulka Farmaajo, ayaa sheegtay in ay soo dhaweyneyso go’aanka loogu laabtay dhameystirka heshiiskii 17-kii September.
Mahmet Yilmez, wuxuu RW Rooble, ku boorriyay howlaha ilaa hadda u qabsoomay oo ay ugu horreyso, xal u helidda arrimaha ciiadamada, kaalinta dhex-dhexaadnimo ee uu istaagay iyo ku dhawaaqidda shirka wada tashiga qaran.